MANGABE MAEVATANANA : Nipoaka ny baomba“lacrymogène”, olona fito no voasambotra
Raikitra indray ny ady tany ao amin’ny Kaominina ambanivohitra Mangabe, Distrikan’i Maevatanàna. Ny alatsinainy teo dia mpitandro ny filaminana miisa 75, izay ahitana Miaramila, Polisy Sy Zandary no nifanandrina tamin’ireo fokonolona nanakana ny hiasan’ny trakiteran’ny orinasa Somia teo amin’ny tany misy azy ireo. 21 décembre 2016
Nisy ny savorovoro ka voatery nandefa baomba mandatsa-dranomaso ny mpitandro filaminana.
Olona fito tamin’ireo fokonolona no voasambotra, ary iray kosa tapa-tanana. Tany manana velarana 418 ha io iadian’ny fokonolona sy ny orinasa Somia io. Araka ny fantatra mantsy dia ny Somia no tompon’ny tany, nefa efa maty ela i Akesson, tompon’io orinasa io.
Nandritra ny folo taona maro dia ny mponina tao no namboly tamin’ny tany ary nanamora ny fiainana tao izany.
Tsy mahatoky ny vahoaka fa tena ny orinasa Somia marina io maka ny tany nanomboka ny taona 2008 iny, satria dia zanak’olona ao an-toerana ihany no milaza fa mpiasa sy solontenan’ny Somia. Mitaky ny hisehoan’i Karl, zanak’i Akesson any izy ireo hanamarina fa ny orinasa Somia marina no maka ny taniny.
Ny 30 novambra teo no nidina tany ny Lehiben’ny Faritra sy ny Préfet hamaha ny olana, ka tamin’izay dia nisy ny tolo-kevitra fa ny roa am-pahatelon’ny tany no tazonin’ny tompony fa ny ampahatelony kosa hozaraina amin’ny vahoaka. Tsy nanaiky io fandaminana io ny vahoaka any satria mbola mihevitra hatrany izy ireo fa mpisandoka ireo milaza fa tompon’ny tany ireo.
Miantso ny Fitondram-panjakana hijery akaiky ny olana izy ireo sao fitaka no atao azy ireo